ट्रमाको निर्देशकमा डा. पौडेल, डा. यादवले काम गर्दागर्दै मिडियाबाट पो थाहा पाए– पद त अर्कैको भइसकेछ – Health Post Nepal
ट्रमाको निर्देशकमा डा. पौडेल, डा. यादवले काम गर्दागर्दै मिडियाबाट पो थाहा पाए– पद त अर्कैको भइसकेछ
२०७६ फागुन ८ गते १८:११
राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको निर्देशकमा डा. सन्तोष पौडेल नियुक्त भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले कार्यरत निर्देशकको पदावधि आधाभन्दा बढी समय बाँकी नै हुँदा नयाँ निर्देशक नियुक्त गरेका हुन् ।
यससँगै डा. पौडेलले १० दिनभित्र दुई नियुक्ति पाएका छन् । यसअघि माघ अन्तिम साता उनले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)को कार्यकारी परिषद् सदस्यको नियुक्ति पएका थिए । न्याम्सका सहकुलपतिको हैसियतमा मन्त्री ढकालले डा. पौडेललाई कार्यकारी परिषद् सदस्यमा मनोनयन गरेका हुन् । ट्रमा सेन्टर पनि न्याम्सअन्तर्गत नै सञ्चालित छ ।
डा. पौडेल सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)निकट चिकित्सकहरूको संगठन राष्ट्रिय चिकित्सक संघका अध्यक्ष हुन् । उनी नेकपाका प्रभावशालीमध्ये गनिने एक नेताका ज्वाइँसमेत हुन् ।
अनौठो विषय त के रह्यो भने डा. पौडेलले निर्देशकको नियुक्तिपत्र बुझिसकेको खबर कार्यरत निर्देशक डा. प्रमोद यादवले मिडियामार्फत मात्र पाए । स्वाभाविक कार्यकालका हिसाबले डा. यादव अझै करिब १३ महिना निर्देशक रहने थिए । यद्यपि, उनले निमित्तका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए । उनलाई ५ चैत ०७५ मा ट्रमाको निमित्त जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
बिहीबार डा. यादव निर्देशकका रूपमा ट्रमा सेन्टरको काम गरिरहेका थिए । एक अनलाइन मिडियामा ट्रमामा अर्कै व्यक्ति निर्देशक नियुक्त भएको खबर आएपछि बल्ल उनलाई पद गइसकेको थाहा भयो ।
यसबीचमा मन्त्रलायले उनको कार्यसम्पादनबारे उनलाई कुनै जिज्ञासा राखेको छैन, न त कुनै कसुर वा अनियमितताबारे सोधखोज नै गरेको छ । नयाँ नेपालको नारा दिने झन्डै दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकार, त्यसमाथि पनि सुरुदेखि नै कसैको दबाब, भनसुन वा पार्टीगत स्वार्थमा नआई काम गर्ने रटान दिँदै आएका मन्त्री ढकालमाथि ट्रमाको नियुक्तिले गिज्याइरहेझैँ देखिन्छ ।
मिडियाबाट नयाँ निर्देशक आएको थाहा पाएका डा. यादवले हेल्थपोस्टसित भने, ‘मन्त्रीज्यूको इच्छाले गर्नुभयो होला, मैले कार्यालयमा काम गर्दै गर्दा अनलाइन मिडियामार्फत थाहा पाएँ ।’
पादावधि बाँकी नै भएको अवस्थामा जानकारी नै नदिई जिम्मेवारी खोसिनुले राम्रो सन्देश नजाने डा. यादवले प्रतिक्रिया दिए । आफूले छोटो अवसरमा संस्था सुधारका लागि निकै राम्रा काम गरे पनि उचित मूल्यांकन नभएकोमा उनको गुनासो छ ।
‘कार्यकाल नसकीकन बीचमै अर्को नियुक्ति गर्दा त्यति राम्रो हुँदैन,’ उनले भने, ‘मैले जिम्मेवारी सम्हालेको छोटो समयमा देखिने गरी नै धेरै नै सुधारका काम गरेँ, तर त्यसको मूल्यांकन भएन ।’
डा. सन्तोष पौडे